मनोज पण्डित - कान्तिपुर समाचार
मनोज पण्डितका लेखहरु :
अप्ठ्यारो, असहजता, अभाव, अन्यौलता आदि हुनु समस्या होइन । समस्या तब हो जब मानिससँग कुनै पनि परिस्थितिको लागि विकल्प हुँदैन । विकल्प नहुनुमा समस्या हुन्छ । एउटै कुरा दोहोरिरहनुमा समस्या हुन्छ । र दोहोराइरहन बाध्य हुनुमा समस्या हुन्छ । अर्थात् बाध्यतामा मूल समस्या हुन्छ ।
आदरणीय ..... (कसलाई सम्बोधन गरौं, म अल्मलिएँ त्यसैले रोकिएँ)यो चिठी मैले मेरो देशको प्रधानमन्त्रीज्यूले पढिदिउन् भनेर लेख्न खोजेको हो । तर विशेष सूत्रबाट थाहा पाएँ, उहाँ त सत्ता समीकरणमा व्यस्त हुनुहुन्छ । त्यसैले पढ्न भ्याउनु हुन्न रे ! उसो त उहाँ कसैको कुरा नै सुन्नु हुन्‍न रे !
‘दासढुंगा’ सुटिङका तीतामीठा सम्झना
अमर लामाको पात्रमा थुप्रै अनुहार हेरिरहेका बेला दयाहाङ राईलाई दोस्रो भेटमा एउटा चुनौती दिएँ । दयाहाङले मेरो चुनौतीलाई थोरै मिहिनेत गरेर छोटो समयमै पूरा गरे । पोखरामा हरि पाण्डेको घरमा खाना खाने दृश्य खिच्दा अमर लामा पाएकोमा पूर्ण निर्धक्क भएँ ।